Iindaba - Nguwuphi umahluko phakathi kweinki esekwe emanzini kunye neoyile esekwe kwioyile kumatshini wefoto?
I-inki esekwe kwi-oyile kukungxenga i-pigment kwi-oyile, enjengeoyile yezimbiwa, ioyile yemifuno, njl njl. I-inki ibambelela embindini ngokungena kweoyile kunye nomphunga kwindlela yokushicilela; I-inki esekwe emanzini isebenzisa amanzi njengendawo yokusasaza, kwaye i-inki isendaweni yokushicilela I-pigment incamathele kulowo uphakathi ngokungena kwamanzi kunye nomphunga.
Ii-inki kwishishini lokufota zahlulwe ngokokusetyenziswa kwazo. Banokwahlulwa-hlulwa babe ziindidi ezimbini: Inye, iiyki esekwe emanzini, ezisebenzisa izinyibilikisi zamanzi nezinyibilikayo emanzini njengezona zinto ziphambili ezinyibilikisayo kwisiseko sombala. Enye iyinki esekwe kwioyile, esebenzisa izinyibilikisi ezinganyibilikiyo zamanzi njengeyona nto iphambili yokunyibilikisa isiseko sombala. Ngokonyibilikiso lwezinyibilikisi, zinokwahlulwa-hlulwa zibe ziindidi ezintathu. Okokuqala, ii-inki ezenziwa ngedayi, ezisekwe kwidayi, ngoku zisetyenziswa ngoomatshini abaninzi beefoto zangaphakathi; Okwesibini, ii-inki ezenziwe ngombala, ezisekwe kwiiinki ezisekwe kumbala zisetyenziswa kwiiprinta zangaphandle ze-inkjet. Okwesithathu, inki ye-eco-solvent, kwindawo ethile phakathi, isetyenziswa koomatshini befoto bangaphandle. Ingqwalaselo eyodwa kufuneka ihlawulwe kwezi ndidi zintathu zeinki azinakuxutywa. Oomatshini abasekwe emanzini banokusebenzisa kuphela ii-inki ezisekwe emanzini, kwaye oomatshini abasekwe kwioyile banokusebenzisa kuphela ii-inki ezibuthathaka kunye nee-inks ze-solvent. Ngenxa yokuba i-inki yeekhatriji, imibhobho kunye nemilomo yamanzi esekwe emanzini kunye neoyile esekwe kumatshini yahlukile xa kufakwa umatshini, ke, i-inki ayinakusetyenziswa ngokungakhethi.
Kukho izinto ezintlanu eziphambili ezichaphazela umgangatho we-inki: ukusasazeka, ukuqhuba, ixabiso le-PH, uxinzelelo lomhlaba kunye ne-viscosity.
1) Ezasasaziweyo: Yeyona arhente umphezulu esebenzayo, umsebenzi wayo kukuphucula iipropati ebonakalayo inki umphezulu, kunye nokwandisa ukuhambelana kunye wettability ye-inki kunye isiponji. Ke ngoko, i-inki egciniweyo kunye neqhutywa ngesiponji ngokubanzi ine-dispersant.
2) Ukuqhuba: Eli xabiso lisetyenziselwa ukubonisa inqanaba lomxholo wetyuwa. Ukufumana ii-inki ezisemgangathweni ongcono, umxholo wetyuwa akufuneki udlule kwi-0,5% ukunqanda ukwenziwa kweekristali embhobho. I-inki esekwe kwi-oyile igqiba ukuba yeyiphi na umlomo oza kuyisebenzisa ngokobungakanani be-particle pigment. Iiprinta ezinkulu ze-inkjet ze-15pl, i-35pl, njl. Njl. Zichonge ukuchaneka komshicileli we-inkjet ngokobungakanani be-particle. Oku kubaluleke kakhulu.
3) Ixabiso le-PH: libhekisa kwixabiso le-pH kulwelo. Okukhona isisombululo sine-asidi ngakumbi, ixabiso eliphantsi le-PH. Kwelinye icala, okukhona isisombululo sine-alkaline, kokukhona inyusa ixabiso le-PH. Ukuthintela i-inki ekubambeni umlomo, ixabiso le-PH kufuneka libe phakathi kwe-7-12.
4) Ingxwabangxwaba yomphezulu: Inokuchaphazela ukuba i-inki ingenza amathontsi. I-inki esemgangathweni ongcono ine-viscosity ephantsi kunye noxinzelelo oluphezulu lomhlaba.
5) I-viscosis: Kukuchasana kolwelo ukuhamba. Ukuba i-viscosity ye-inki inkulu kakhulu, iya kuphazamisa unikezelo lwe-inki ngexesha lokuprinta; ukuba i-viscosity incinci kakhulu, intloko ye-inki iya kuhamba ngexesha lokuprinta. Inki ingagcinwa iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6 kubushushu begumbi eliqhelekileyo. Ukuba inde kakhulu okanye iya kubangela imvula, iya kuchaphazela ukusetyenziswa okanye iplagi. Ukugcinwa kweinki kufuneka kutywinwe ukunqanda ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo. Iqondo lobushushu akufuneki libe phezulu kakhulu okanye liphantsi kakhulu.
Inkampani yethu ithumela ngaphandle uninzi lweeinki zangaphakathi nangaphandle, ezinje nge-inki yokusombulula i-eco, inki yokusombulula, inki yeslim, inki yombala kwaye ineendawo zokugcina ezingaphezu kwama-50 zalapha ekhaya. Sinokukunika izinto ezinokusetyenziswa nangaliphi na ixesha ukuqinisekisa ukuba umsebenzi awuphazanyiswa. Nxibelelana nathi ukufumana amaxabiso e-inki yakho yendawo.